I-Pantyhose ongafuni ukuyenza
Abesifazane abaningi, abajwayele imikhiqizo ye-hosiery yesigaba sesabelomali, abakuqondi ukuthi kungani badinga ukushintsha u-Sisi, Omsa noSanpellegrino owaziwayo onobukhulu obunenani eliphindwe kabili kakhulu. I-Pantyhose yale mikhiqizo ihle ngokwabo, kodwa ... konke kuyaziwa uma kuqhathaniswa. Uma siqhathanisa i-velours Omsa kanye ne-Sisi enama-analogs ashibhile, ke, ngokungangabazeki, owokuqala uzowina. Kodwa njengoba sisondelene nemikhiqizo yeklasi le-Lux, imikhiqizo ejwayelekile futhi ethandwayo ilahlekelwa ngokucacile.
Isitolo esitolo se-VivaCalze sisisize ukuthi siqonde ukuthi yikuphi umehluko phakathi kwesabelomali nemikhiqizo yokunethezeka yama-pantyhose yabesifazane.
I-seamless, engenasisindo, ecashile
I-pantyhose evela enkampanini i-Falke, uphawu oluyingqayizivele elinamakhulu eminyaka emlandweni, liyoletha injabulo yangempela kumnikazi wayo. I-silky, elastic, ebunjiwe, ivumelane ngokugcwele kulo mfanekiso, hhayi ukwakha amahlumela amabi ahamba okhalweni. Igama elithi Sensation libonisa okuqukethwe kwalawa ma-pantyhose: i-tender ekhangayo, njenge-spider web, ihlangana nomzimba ngokucophelela, hhayi umcibisholo owodwa oveza ukuthi kukhona khona.
Naphezu kobude obungama-20 kuphela, ziqinile kakhulu, kanti ukugqokwa okukhethekile kwe-3D yezinhlamvu kanye ne-high elastane ephakeme kukuvimbela ukwakheka kwezingwegwe. Isimo 20 - imodeli ephelele yehlobo nezwane ezingabonakali, ezingagqoka ngesolika elihle kunazo zonke noma nge-satin yokugqoka futhi ungabazi ukuthi akunakwenzeka. Uma kwakungeyona yebhande elidayayo elincane elingagudluli futhi lingalokothi likhuni, ama-Falke Sensation angu-20 ku-version corporal (Umbala we-Powder) ngeke abonakale esikhumbeni.
Ehle futhi ekhohlisa
Ama-stockings amahle kufanele abe ku-wardrobe yawo wonke owesifazane. Bakha isimo sengqondo, bakhulise ukuzethemba futhi bavumele ukuba bangenakuvinjelwa. Ngisho noma ngaphansi kwezingubo lezi zambatho zezintambo zabesifazane zihlala zingabonakali kwabanye, u-hostess ngokwakhe uzizwa kahle ukuthi ugqoke into enhle nenhle. Intombazane emasitokisini iguquka, amehlo agcwala, amahlombe aqondile. Futhi uma ukhetha ngale njongo akuyona into evamile kodwa i-elite imodeli ngokuthungwa okubucayi, isembozo esincane kodwa esomelele, njengesimodeli sobukhosi obuyi-15 kusukela e-Italy brand Oroblu, khona-ke umphumela uyoba namandla kakhulu.
Ngisho nasemsebenzini, owesifazane kufanele ahlale owesifazane. Futhi noma ngabe ihambisana nemiqulu nokubhala, emihlanganweni yebhizinisi kanye nemihlangano yokuhlela, ukudlala nokudlala ngokobulili ku-suit akufanelekile, lokhu akusebenzi kuma-tights. Amamodeli we-Classic avela ku-premium ingxenye azohlala efanelana kahle nemilenze yabesifazane, evula ama-curve abo abushelelezi ekubukeni okukhethiweyo kwabalingani babo. Ubumnene, ubumnene, amandla kanye nekhwalithi elihle kakhulu ebhodini elilodwa - nansi incazelo emfushane yezingubo ezivela kuBombay microtool ye-brand Max Max.
Ekwindla epholile nasehlobo elishisayo
Ngokumelene nokwaziswa kwemikhiqizo yezinto ezinethezeka uFilie Matignon ubheka okungaphezu kokukhethwa kwesabelomali. Nokho, izimfanelo zakhe ezinhle kakhulu kulokhu, akalahlekelwa. Amathanga afudumele, athambile futhi ahlanzekile, anezinga eliphakeme lokukotini likaCotton 100 - lokhu kuyisibonelo esizosiza kuzo zonke izintombi ezivuthayo nezomoya ekwindla. Futhi ihlobo lizoba yikhethelo elihle lamathambo amasha angenawo ama-8 we-Nudite Solaire 8.
Ukukhethwa kwezesekeli zesifazane
I-physics yomzimba: "imihlobiso yesayensi" i-Avgvst + Rrotey Temen
Umgexo - "ikhola": indlela yokugqoka nokubukeka kahle
I-Soie - "i-silk" iqoqo lezinhlobonhlobo ze-elite kusuka ku-Dior
Ukuqoqwa kobucwebe kusuka ku-Tiffany & Co ne-Dover Street Market
Nakhu yiziphi izinto zokugqoka ezokuletha inhlanhla ngonyaka onyaka-2018
Kulungile kanjani ukubheka ubhiya?
Ukucindezeleka okufihlekile: thola futhi ukhululeke!
Indlela yokulungisa i-glaze yekhekhe le-Easter: izindlela zokupheka ngezinyathelo ngesithombe
Isaladi kusuka ku-squash, indwangu kanye nobhontshisi bezinhlamvu
Ukukhetha okulungile kombhede womabili
Amaski ezinwele ezisekelwe kumazambane
Indlela yokusinda igebe phakathi kowesifazane nowendoda
Ukunakekela i-parrot yokuzenzela
Izitha zobuhle besifazane nendlela yokubhekana nazo
Isaladi yamaGreki yoNyaka Omusha
Ushaka ubhaka nemifino
Indlela yokuqoqa izinhlanzi ezibomvu?
I-Contour lip liner
Sandwich nge Steak
I-casserole ebhaka ne-bacon